संखुवासभा घटना : अघिल्लै दिन बनेको थियो हत्या योजना ! - Bulbul Samachar
संखुवासभा घटना : अघिल्लै दिन बनेको थियो हत्या योजना !
bulbul मंगलबार, असोज ५ गते 163 views
प्रहरीले पत्ता लगाए मानसिक रोगको औषधि खाइरहेका लोकबहादुर एक्लैले जिम्मा लिने र जेल जानेबारे पनि सल्लाह भएको खुलासा !
मादी नगरपालिका–१ उमलिङस्थित खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या घटनाबारे थप रहस्य खुल्दै गएको छ । भदौ २१ मा भएको सामूहिक हत्या आफन्तले नै नियोजित रूपमा गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको हो । घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ गरिएका थप चार जनालाई प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
साताको राशिफल (असोज ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म)
यी हुन् राजसंस्था चाहाने कलाकार !